US NAVY: Rano fisotro any Hawaii ho voapoizin'ny solika?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » US NAVY: Rano fisotro any Hawaii ho voapoizin'ny solika?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny trano fitehirizana solika betsaka ao amin'ny Red Hill ao amin'ny Nosy Oahu, fantatra amin'ny anarana hoe tranoben'ny Navy Red Hill dia naorina tamin'ny fiandohan'ny taona 1940 nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Izy io dia misy tobin-tsolika goavam-be 20 any ambanin'ny tany, ary tamba-jotra fantsona mitondra solika mankany Pearl Harbor, ankoatra ny toerana hafa.
Saika hampiditra solika amin’ny famatsian-drano fisotro eto amin’ny Nosy ve ity fotodrafitrasa ity?
Manana olana ny tafika an-dranomasina amerikana sy ny fanjakan'i Hawaii.
Nisy mpitsikilo iray nilaza tamin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Hawaii tamin'ny volana septambra fa nanome fijoroana vavolombelona diso ny tompon'andraikitra ao amin'ny Navy ary nitazona vaovao momba ny harafesiny tao amin'ny tobin'ny solika Red Hill ao Oahu.
Araka ny tatitra tao amin'ny Civil Beat, haino aman-jery monina any Hawaii dia mety misy olana amin'ny famatsiana rano fisotro madio ao Honolulu.
Ny harafesina dia mety hampidi-doza ity rafitra ity amin'ny famoahana solika ao amin'ny famatsian-drano ny nosy.
Manoloana izany vaovao izany dia nangataka ny talen'ny fahasalamana Libby Char ny sampana mba hanokatra indray ny dingana ara-dalàna izay hanampy amin'ny famaritana ny hiafaran'ity tranobe antitra ity.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Navy eTurboNews tsy nisy leak ary milamina ny raharaha amin'izao fotoana izao.
Niresaka momba ny pejy web US NAVY izy: https://cnic.navy.mil/regions/cnrh/om/red-hill-tank.html
Nidina ity pejy ity ary nekena izany, saingy tsy nisy safidy nomena.
Niteraka fanahiana lehibe teo amin'ny mponina sy ny mpiaro ny tontolo iainana ny fahatapahan-tsolika nandritra ny am-polony taona maro taorian'ny fametrahana azy, izay matahotra ny mety ho poizin'ny solika ny rano fisotro ao ambanin'ny siny.
Mety hampidi-doza ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika ao amin'ny distrikan'i Honolulu izany.
Ny fihainoana ny raharaha niadiana dia natomboka taorian'ny nanoheran'ny Sierra Club of Hawaii sy ny Board of Water Supply Honolulu ny fangatahana fahazoan-dàlana hiasa amin'ny Navy tamin'ny taona 2019. Natao tamin'ny fiandohan'ny volana febroary ny fihainoana ary nosokafana indray ny volana jolay taorian'ny famoahana solika avy amin'ny fantsona vaky tao amin'ny tonelina ambanin'ny tany iray.
Tamin'ny 16 septambra, nisy manamboninahitra an-dranomasina izay mpitory ny vaovao tamin'ny biraon'ny DOH Hazard Evaluation and Emergency Response fa nisy fijoroana vavolombelona tsy marina natolotra, ary ny vaovao manan-danja dia nosakanan'ny tafika an-dranomasina tamin'ny fomba diso tamin'ny raharaha niadiana.
Nitafatafa tamin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao Hawaii tamin'ny volana oktobra ity mpitsikilo Navy ity, hoy ny memo.
Notaterin'ilay olona fa tsy nambara tamin'ny fanjakana tamin'ny fangatahana fahazoan-dàlana avy amin'ny tafika an-dranomasina ny halehiben'ny fotodrafitrasan'ny rafitra fitahirizana tanky ambanin'ny tany, anisan'izany ny fantsona, ary tsy voatana araka ny tokony ho izy ny fampahalalana momba ny tantaran'ny harafesina, araka ny memo.
eTurboNews nanatona ny Governora, ny Lt. Governora ary ny ben'ny tanànan'i Honolulu nefa tsy nahazo valiny.